‘समावेशी आयोगले महिलाका लागि पनि काम गर्छ’ (अडियो/भिडियो)
३ साउन, काठमाडौं ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५८ अनुसार नयाँ आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोग गठन भएको छ । यो नेपालमा पहिलो पटक गठन भएको आयोग हो । संविधान अनुसार पाँच जना सदस्य हुने यस आयोगमा हाल अध्यक्ष र एकजना सदस्य मात्र नियुक्त भएका छन् । विभिन्न ‘क्लष्टर’को आयोग भएको अवस्थामा यस आयोगले चाहिं कुन कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्छ ? भनेर लक्ष्मी बस्नेतले आयोगका सदस्य विष्णु ओझासँग गरेको कुराकानी :
आयोगले के काम कसरी गर्न थालेको छ ?
नयाँ आयोग भएकाले कार्यालय स्थापना, व्यवस्थापनदेखि सबै काम थालियो । यस्ता व्यवस्थापकीय काम बाहेक आयोगले गर्नुपर्ने काम संविधानमै तोकिएको छ । कार्यक्षेत्र ठूलो छ । संविधानमा लेखिएअनुसार खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको समग्र क्षेत्रमा काम गर्छ । अहिलेसम्म हामीले खस आर्य, अपांगता भएका व्यक्ति, श्रमिक, किसान आदि समूहसँग एक चरणको छलफल गरिसक्यौं । त्यस्तै आयोग संचालनका लागि आवश्यक नीति, नियम बनाउने काम पनि भइरहेको छ ।
यो त नयाँ आयोग, यति धेरै कार्य क्षेत्र छ, सम्बन्धित सबैलाई थाहा छ ?
छैन । जसजसलाई थाहा हुनुपर्ने हो, उनीहरुलाई थाहा छैन । त्यो भएर आयोगको बारेमा सबैलाई जानकारी दिनु पनि अत्यन्त जरुरी छ । अहिलेसम्म हामी जहाँ पुग्छौं, आयोगको बारेमा पनि जानकारी दिने काम गरिरहेका छौं । तर यतिले मात्र पुग्दैन, संचारमाध्यमबाट सूचनाहरु बजाउने बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
विभिन्न क्लष्टरहरुको जस्तै महिला, मधेसी, थारु, जनजाति आदि आयोग पनि छ, तपाईंहरुको काम दोहोरिंदैन ?
समावेशी आयोगका सदस्य विष्णु ओझासँगको अडियो कुराकानी ।
कतिपय मुद्दा साझारुपमा सबैले उठान गर्नुपर्ने हुन सक्छन्, त्यस्तोमा सँगसँगै काम गर्न सकिन्छ । अहिले पनि हामी यस आयोगसँग मिल्ने कार्य क्षेत्र भएका आयोगलगायत, विभिन्न तहको सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग पनि भेटिरहेका छौं । साझा मुद्दामा कसरी समन्वय गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यसका साथै आयोगको काम त स्थानीय स्तरसम्म हुन्छ, त्यसैले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले दोहोरिने संभावना हुँदैन । लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, पछाडि परेका तथा पारिएका वर्ग र क्षेत्रको लागि त सबैले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोग पनि भएको अवस्थामा यस आयोगले महिला सवालमा काम गर्छ कि गर्दैन ?
संविधानमा यस आयोगले गर्नुपर्ने भनेर जुन जुन समदाय, वर्ग र क्षेत्रलाई तोकेको छ । त्यस भित्रको चाहिं महिलालाई छुट्टयाउन मिल्दैन । त्यसैले यस आयोगले महिलाहरुको लागि पनि काम गर्छ । जस्तै ः कतिपय कुरामा राष्ट्रिय महिला आयोगसँग समन्वय होला, तराइ मधेशका महिलाको मुद्दामा काम गर्न मधेस आयोगसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ला । समग्रमा घरपरिवार र समाजको विकासका लागि महिला वा पुरुषको लागि छुट्टाछुट्टै काम गरेर हुँदैन । महिला र पुरुषलाई सँगसँगै अघि बढ्ने खालको काम गर्नु जरुरी छ ।
आयोगको कार्यक्षेत्र बारे जानकारी दिंदै सदस्य ओझा